IZenzo 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 USawule wayekholiswa kukubulawa kwakhe.+ Ngaloo mhla kwavela intshutshiso+ enkulu nxamnye nebandla elaliseYerusalem; bonke ngaphandle kwabapostile bachithachitheka+ kuyo yonke imimandla yelakwaYuda neSamariya. 2 Kodwa amadoda awoyik’ uThixo amthwala uStefano aya kumngcwaba,+ aza amenzela isijwili esikhulu.+ 3 USawule, ngoko, waqhubana ngokuneengcwangu nebandla. Wayengenela izindlu ngezindlu, erhuqela phandle amadoda nabafazi, abanikele entolongweni.+ 4 Noko ke, abo babechithachithekile balityhutyha ilizwe bevakalisa iindaba ezilungileyo zelizwi.+ 5 UFilipu, yena, wehla waya kwisixeko saseSamariya+ waza waqalisa ukushumayela ngoKRISTU kubo. 6 Ngamxhelo mnye izihlwele zazinikela ingqalelo kwizinto abezitsho uFilipu ngoxa zaziphulaphule yaye zikhangele kwimiqondiso awayeyenza. 7 Kuba kwakukho abaninzi ababenoomoya abangahlambulukanga,+ yaye bona babedanduluka ngelizwi elikhulu baze baphume. Ngaphezu koko, abaninzi ababefe umzimba+ neziqhwala baphiliswa. 8 Ngoko kwabakho uvuyo olukhulu kweso sixeko.+ 9 Ke kaloku kweso sixeko kwakukho ndoda ithile igama linguSimon, leyo, phambi koku, yayiqhelisela ubugcisa bomlingo+ yaye ilutsho luthi manga uhlanga lwaseSamariya, isithi yona ngokwayo yayinguthile omkhulu.+ 10 Yaye bonke, ukususela koyena mncinane kuse koyena mkhulu, babenikela ingqalelo kuyo baze bathi: “Lo mntu ungaMandla kaThixo, anokubizwa ngokuthi Makhulu.” 11 Ngoko babeye banikele ingqalelo kuye ngenxa yokuba wayebatsho bathi manga kangangethuba elide ngobugcisa bakhe bomlingo. 12 Kodwa xa bamkholelwayo uFilipu, owayevakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo+ nezegama likaYesu Kristu, babhaptizwa, amadoda nabafazi.+ 13 NoSimon ngokwakhe waba likholwa, yaye, emva kokubhaptizwa, wayesiba kunye noFilipu rhoqo;+ kwaye wayethe manga kukubona imiqondiso nemisebenzi yamandla emikhulu isenzeka. 14 Bathi bakuva abapostile eYerusalem ukuba iSamariya yayilamkele ilizwi likaThixo,+ bathumela uPetros noYohane kubo; 15 yaye bona behla baza babathandazela ukuba bafumane umoya oyingcwele.+ 16 Kuba wawungekaweli namnye kubo, kodwa babebhaptizwe nje kuphela egameni leNkosi uYesu.+ 17 Ngoko bababeka izandla,+ baza bamkela umoya oyingcwele. 18 Ke kaloku xa uSimon wabona ukuba ngokubekwa kwezandla zabapostile umoya wawunikelwa, wathembisa ukubanika imali,+ 19 esithi: “Nam ndinikeni eli gunya, ukuze nabani na endimbeka izandla amkele umoya oyingcwele.” 20 Kodwa uPetros wathi kuye: “Ngamana isilivere yakho ingabhanga kunye nawe, ngenxa yokuba ubucinga ukufumana isipho sesisa sikaThixo ngemali.+ 21 Akunanxalenye ungenalo naqashiso kulo mbandela, kuba intliziyo yakho ayithanga tye emehlweni kaThixo.+ 22 Guquka, ke ngoko, kobu bubi bakho, uze ukhunge kuYehova+ ukuze, ukuba kunokwenzeka, ulixolelwe eli cebo lentliziyo yakho; 23 kuba ndiyabona ukuba uyinyongo enetyhefu+ nomxokelelwane wentswela-bulungisa.”+ 24 Ekuphenduleni uSimon wathi: “Nina, ndenzeleni isikhungo kuYehova ukuze ndingafikelwa nanye yezo zinto niye nazitsho.”+ 25 Ngoko ke, xa babenikele ubungqina ngokucokisekileyo yaye belithethile ilizwi likaYehova, babuyela eYerusalem, bahamba bezivakalisa iindaba ezilungileyo kwiidolophana ezininzi zamaSamariya.+ 26 Noko ke, ingelosi kaYehova+ yathetha kuFilipu, isithi: “Suka uhambe uye emzantsi kwindlela ehla ivela eYerusalem isiya eGaza.” (Le yindlela eyinkqantosi.) 27 Ngako oko wesuka wahamba, yaye, khangela! ithenwa+ elingumTiyopiya,+ indoda esemagunyeni phantsi kukaKandase ukumkanikazi wamaTiyopiya, neyayiphathiswe bonke ubuncwane bakhe. Laliye eYerusalem ukuya kunqula,+ 28 kodwa lalibuya yaye lalihleli enqwelweni yalo lifunda ngokuvakalayo umprofeti uIsaya.+ 29 Ngoko umoya wathi+ kuFilipu: “Yiya uze uzibandakanye kule nqwelo.” 30 UFilipu wabaleka ecaleni waza waliva lifunda ngokuvakalayo uIsaya umprofeti, yaye wathi: “Uyakwazi na okunene oku ukufundayo?” 31 Lathi: “Ngokwenene, ndingakwenza njani oko, ngaphandle kokuba ndikhokelwe nguthile?” Yaye lambongoza uFilipu ukuba akhwele aze ahlale phantsi kunye nalo. 32 Ke kaloku isicatshulwa seSibhalo elalisifunda ngokuvakalayo yayisesi: “Njengemvu wasiwa ekuxhelweni, nanjengemvana engenalizwi phambi komchebi wayo, wenjenjalo ukungawuvuli umlomo wakhe.+ 33 Ebudeni bokuthotywa kwakhe umgwebo wasuswa kuye.+ Ngubani na oya kuxela iinkcukacha zesizukulwana sakhe? Ngenxa yokuba ubomi bakhe bususiwe emhlabeni.”+ 34 Ekuphenduleni ithenwa lathi kuFilipu: “Ndiyakubongoza, Umprofeti ukutsho malunga nabani na oku? Malunga naye okanye malunga namntu wumbi?” 35 UFilipu wawuvula umlomo wakhe+ yaye, eqala ngesi Sibhalo,+ wazivakalisa kulo iindaba ezilungileyo ezingoYesu. 36 Ke kaloku njengoko babehamba endleleni, bafika manzini athile amaninzi, laza ithenwa lathi: “Khangela! Amanzi amaninzi; yintoni na endithintelayo ukuba ndibhaptizwe?”+ 37 —— 38 Ngako oko layalela ukuba inqwelo ime, baza bobabini behla bangena emanzini, bobabini uFilipu nethenwa; walibhaptiza. 39 Xa benyukayo bephuma emanzini, ngokukhawuleza umoya kaYehova wamqhubela ukuba emke uFilipu,+ yaye ithenwa alizange libe sambona kwakhona, kuba lahamba linemihlali. 40 Kodwa kwafumaniseka ukuba uFilipu useAshdode, yaye wawutyhutyha loo mmandla, waqhubeka ezivakalisa+ iindaba ezilungileyo kuzo zonke izixeko de wafika eKesareya.+